သူမအရေးပေါ် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတဲ့ အမေရိကန်ခရီးစဉ်အကြောင်းကို ပြောပြလာတဲ့ပန်ဆယ်လို - Update News
သူမအရေးပေါ် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတဲ့ အမေရိကန်ခရီးစဉ်အကြောင်းကို ပြောပြလာတဲ့ပန်ဆယ်လို
July 5, 2021 July 5, 2021 - by Best_admin
အာဏာသိမ်းပြီးကာလတွေမှာတော့ စကစကနေအပူတပြင်းနဲ့အလိုရှိနေတဲ့ပန်ဆယ်လိုကတော့ လွတ်မြောက်ရာဖြစ်တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကိုသွားရောက်နိုင်ခဲ့လို့ လူတွေရဲ့ဝေဖန်မှုကိုခံနေရပေမဲ့ ပန်ဆယ်လိုကတော့အပြုံးမပျက်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီနေ့မှာတော့ပန်ဆယ်လို ကအမေရိကန်ကိုရောက်လာခဲ့ပုံကို “အမေရိကန်မြေကိုစနင်းမိပုံကထူးဆန်းတယ်။
လေယာဉ်ဆင်းတာနဲ့လေယာဉ်မယ်က နာမည်ကိုမိုက်ကခေါ်ပြီး အရင်ဆုံးထွက်ခိုင်းတယ်။ လေယာဉ်ပေါ်ကဆင်းတာနဲ့ ရဲကလာခေါ်သွားရော။ ဘာလဲဟငါ့ဘဝတော့စမုံတုံးပြီလားပေါ့။ အမှန်တကယ်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ ပုံမှန်ခရီးသည်မဟုတ်လို့ ဖြည့်ရမယ့်ဖောင်တွေမတူလို့ကြိုခေါ်တာ။ သက်ပြင်းချပြီးလာကြိုသူကားနဲ့ပါသွားတော့ ကားပေါ်ကမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကထူးဆန်းပြန်တယ်။
လူမနေတဲ့အိမ်တွေ၊ အိမ်ပျက်ကြီးတွေ၊လူသူမရှိတဲ့လမ်းတွေ။ ငါရောက်လာတာအမေရိကန်လား၊ အခြားဂြိုလ်လားပေါ့။ အမေရိကန်ဆိုတာဒါကြီးလားပေါ့။ ငါ့ကိုဟောလိဝုဒ်ဇာတ်ကားတွေဂျင်းထည့်တာများလားပေါ့။ အမေရိကန်ရဲ့ Crime Rate အမြင့်ဆုံးထဲကမြို့။ မြို့ပျက်နီးပါးဖြစ်နေတဲ့မြို့ကြီး။ အမေရိကန်-ကနေဒါနယ်စပ်လိုင်းက Detroit ဆိုတဲ့မြို့။
လူမနေဘဲပစ်ထားတဲ့အိမ်ပျက်ကြီးတွေဟာ သရဲကားတွေထဲက အိမ်တွေလိုပဲ။ နေရမယ့်နေရာရောက်တော့လေးယောက်ခန်း၊ နှစ်ထပ်ကုတင်နှစ်လုံးချထားတဲ့ ဆယ်ပေပတ်လည်အခန်းလေး။အများသုံးရေချိုးခန်း၊အိမ်သာတန်းစီရသေးတာ။ အခန်းတံခါး သော့ခတ်ခွင့်မရှိ။ နိုင်ငံပေါင်းစုံကနိုင်ငံရေးသမားတွေ စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့နေရာလို့သိရတယ်။ အမှန်တကယ်ကစစချင်း Culture Shock နဲ့ ကိုယ်အရမ်းတုန်လှုပ်သွားတာ။ တကယ်တမ်းပြန်တွေးတော့ အရမ်းဆိုးဝါးတဲ့နေရာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ သူစိမ်းနိုင်ငံ၊ သူစိမ်းတွေကြားကူကယ်ရာမဲ့။ ထမင်းရှာလို့မရတဲ့မြို့။ ပေါင်မုန့်နဲ့ကြက်ဥပြုတ်အပြင်ဘာမှမစားတတ်တဲ့ Asian တောသူဘဝ။ ငတ်လိုက်တာပြောမနေနဲ့။
Asian ဆို China ပဲအသိများတော့ မနက်ခင်းဆိုနိဟောင်၊နိဟောင်နဲ့နှုတ်ဆက်ပျူငှါကြလို့ China မဟုတ်ကြောင်းတတ်သမျှ အီးဂလိအတိုအစနဲ့ရန်တွေ့ရသေးတာ။ ရောက်ပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာဖောင်တစ်ခုမှာလက်မှတ်ထိုးရတယ်။ Homeless ဖြစ်ကြောင်းဖောင်ပေါ့။ ပြုံးမိတယ်။ တဆက်တည်းမှာ မျက်ရည်ကဝဲတယ်။ ဆယ့်နှစ်နှစ်ကျော်ကြိုးစားခဲ့ပြီး သုံးလပဲနေခွင့်ရလိုက်တဲ့အိမ်ကိုတွေးရင်းရင်ထဲအောင့်တယ်။ အဲ့အချိန်က ခံစားချက်ပါ။ လပိုင်းအတွင်းမှာဒီအရာတွေကိုမေ့ပစ်နိုင်လိုက်ပြီ။အရှိတရားကိုလက်ခံဖို့ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရဖူးတာပဲ။ တစ်ပတ်၊ဆယ်ရက်အားတင်းနေထိုင်ပေမယ့် ဆက်မနေနိုင်တော့တာကြောင့် ဘာအကူအညီမှမယူတော့ပါကြောင်းလက်မှတ်ထိုးပြီး မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ရဲ့မြို့လေးကို ထွက်လာခဲ့တယ်။
ထောင်ထဲဝတ်ဖို့ဆိုပြီးအသင့်ထည့်လာတဲ့ အဝတ်အစားသုံးစုံ၊ အအေးဒီဂရီ Zero နီးနီးနေရာကိုအနွေးထည်သော်မှမပါဘဲ ရောက်ခဲ့တယ်။ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ငွေကြေး၊ မိသားစု၊ မိတ်ဆွေအ ပေါင်းအသင်းတွေ၊ ဘာတစ်ခုမှမယူနိုင်ခဲ့ပဲနဲ့ပေါ့။ ဒီကာလမှာ ကိုယ့်ရဲ့လောကဓံကိုတုံ့ပြန်ပုံက အရင်လိုပြင်းပြင်းထန်ထန်မဟုတ်ဘူး။ အရင်ကကိုယ်ကအရာရာကိုစိတ်တင်းပြီးရင်ဆိုင်တယ်။ မာကျောတယ်။ မျက်ရည်မကျဘူး။ ကိုယ်ခံစားရတာ လူမသိစေရဘူး။ အခုလိုဘဝရဲ့ကြုံဖူးသမျှထဲက အပြင်းထန်ဆုံးသောလောကဓံကိုကြုံရချိန်မှာ ကိုယ်အရင်လိုတင်းတင်းမာမာရင်ဆိုင်ရင် အမြစ်ကလန်သွားမယ်ဆိုတာကိုယ်သိတယ်။ လေယူရာယိမ်းတဲ့ပန်းပြားပင်လိုရင်ဆိုင်တယ်။ ဝမ်းနည်းရင်ငိုလိုက်တယ်။ တင်းခံမထားဘူး။ ငိုချလိုက်တယ်။ ငိုပြီးရင်ပြန်ရုန်းထတယ်။
ရယ်စရာမြင်ရင်ရယ်လိုက်တယ်။ ဆဲချင်ရင်ဆဲလိုက်တယ်။အခြားသူတွေရဲ့ကြုံတွေ့ရမှုတွေကိုတွေးပြီး ငါမှဒုက္ခရောက်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ အထပ်ထပ်ရိုက်သွင်းတယ်။ ငါကအရမ်းကံကောင်းတဲ့သူ၊ ငါကသေတွင်းကလွတ်လာတဲ့သူ၊ ငါကတော်ပါသေးတယ်ပဲတွေးတယ်။ ငိုချင်လာရင်ငိုပစ်လိုက်တယ်။ ရယ်ချင်လာရင်ရယ်ပစ်လိုက်တယ်။ အရာအားလုံးဟာကောင်းဖို့ဖြစ်လာတာလို့တွေးတယ်။ ဒီတော်လှန်ရေးကလွဲရင်ဖြစ်ပြီးခဲ့သမျှကို မေ့ပစ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ မတမ်းတမိအောင်နေထိုင်တယ်။ မလွမ်းတတ်အောင်ရှင်သန်တယ်။ ဒါပေမယ့်နာကြင်စေသူအာဏာရူးတွေကို တစ်စက္ကန့်မှမမေ့ဘူးဆိတာပဲ။ ဒီကာလတွေမှာဒီအရာတွေအပြင် အပြင်းအထန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကြုံခဲ့ရတယ်။ စိတ်ကထုံနေသလိုမျိုး ဘာမှကိုမခံစားရတော့ဘူး။ ထူးထွေမနာကြင်မိဘူး။
အသက်အန္တရာယ်ခြိမ်းခြောက်ခံရတာမျိုးတောင် ရယ်မိရုံအပြင် ဘာမှမဖြစ်မိတော့ဘူး။ တစ်ခုခုကြုံတွေ့တယ်။ So What? ကိုယ်လောကဓံကိုတုံ့ပြန်တဲ့ပုံစံက So What ပါပဲ။ ကြောက်လို့ဆိုပြီးပြန်လှည့်ပြေးလို့ရတဲ့အထဲမှာဘဝမပါဘူး။ လောကဓံဆိုတာကလိမ္မာချင်လွန်းရင် တစ်ချက်ပိုရိုက်တတ်တာမို့ မိုက်မိုက်ကန်းကန်းပဲတုံ့ပြန်တယ်။ ရှင်နိုင်ဖို့သန်ရမယ်၊ သန်မာရမယ်။ ရန်သူကသေစေချင်တဲ့အခါရှင်အောင်နေရတာလည်းတိုက်ပွဲပဲတဲ့။
ဒီတိုက်ပွဲမှာကိုယ်နိုင်တယ်။ လှလှပပနိုင်တယ်။ သေရမယ့်ပွဲမှာ မသေအောင်နေနိုင်တာကိုပဲဂုဏ်ယူတယ်။ ဆုံးရှုံးစရာရှိတာမှန်သမျှ ဒီအချိန်မှာဆုံးရှုံးထားလိုက်ချင်တယ်။ ဒီအချိုးအကွေ့ပြင်းပြင်းမှာ ကိုယ်အများကြီးသင်ယူခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲ။ အတွေ့အကြုံဆိုတာအကောင်းဆုံးကျောင်းတော်။ သင်တန်းကြေးကကြေးကြီးလွန်းတယ်တဲ့။ ကိုယ်ကဒီကျောင်းတော်ကနေ ဂုဏ်ထူးယူမယ့်ကျောင်းသူဆိုတာပါပဲ။
ဒီဘဝကြီးဆီကဘာမှမလိုချင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ Comfort Zone မှာသာကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ်ပစ်ချရင်ပစ်ချထားမှာ။ သေစေချင်သူတွေလိုက်သတ်နေသရွေ့ လှလှပပရှင်သန်ပြနေဦးမှာ။ ငါပြန်တည်ဆောက်မယ့်အရာတွေဟာ နင်တို့ဖြိုချခဲ့တဲ့အရာတွေထက် ပိုလှပစေရမယ်။ အချိန်တည်းမှာပဲနင်တို့ကိုရတဲ့နေရာက ဖြိုချနေမယ်ဆိုတာကတိပေးတယ်။? ” ဆိုပြီး ရေးသားထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Previous Article သေဒဏ်ချခံထားရတဲ့ သား၄ယောက်ထဲကသားအငယ်လေး သူ့အမေစီရေးလိုက်တဲ့စာ
Next Article မင်းသိင်္ခ၏ ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက် တစ်ပတ်စာအထူးဟောစာတမ်း [၆.၁၂.၂၀] မှ [၁၂.၁၂.၂၀] ရက်နေ့အထိ
မြန်မာနိုင်ငံသား ထဲမှ ပထမဆုံး လ ကမ္ဘာ ပေါ်မှာ တက်ရောက် လေ့လာသူ လူငယ်တစ်ဦး ပေါ်ထွက်လာ
စစ်ကောင်စီကိုတက်ခွင့်မပြုသည့် ကုလလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီညီလာခံတွင် မြန်မာ့အရေးမဆွေးနွေးရန် ကြိုးပမ်းမှု့ကျရှုံး
တစ်ရွာလုံးနီးပါး ရှိသမျှမိန်းကလေးတိုင်းလိုလို ဆံပင်အရှည်ထားပြီး မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းတဲ့ရွာ